मुक्तक मञ्च पोखरामा प्राञ्जल, मुक्तक उत्सव गर्ने उद्घोष - पोखरा समाचार
४ आश्विन २०७४, बुधबार १३:०७ 20/09/2017 पोखरा समाचार
पोखरा । मुक्तक पोखराको अध्यक्षमा प्राञ्जल सर्वसम्मत रुपमा चयन हुनुभएको छ । मञ्चको छैटौँ अधिवेशबाट ९ सदस्यी कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएको हो ।
मञ्चको उपाध्यक्षमा भरतराज पौडेल, सचिवमा रामजीप्रसाद आचार्य, कोषाध्यक्षमा गौरी तमु र सहसचिवमा रोशन ‘तल्कोटे’ चयन भएका छन् । यस्तै सदस्यहरुमा के. आर. ढकाल, भरत पोखरेल, अनिता दाहाल र शशी अधिकारी ‘सकिला’ रहेका छन् ।
मञ्चका सल्लाहकार दीपक समीपको संयोजकत्वमा सल्लाहकारद्वय रुपिन्द्र प्रभावी र कृष्ण देवकोटा सदस्य रहेको निर्वाचन समितिले कार्यसमितिको घोषणा गरेको थियो । विधानअनुसार २ जना सदस्य मनोनयन गरिने नवचिर्वाचित अध्यक्ष प्राञ्जलले जानकारी दिए ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि प्राञ्जलले आफ्नो कार्यकालमा मुक्तक उत्सव, मुक्तक सञ्चयन प्रकाशन, मुक्तकसम्बन्धी अन्य संस्थासँग सहकार्य लगायतका कार्यव्रmम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । गुल्मीका स्थायी वासिन्दा रही करिब १ दशकदेखि पोखरामा रहेर साहित्य साधना गरिरहनुभएका प्राञ्जल यसअघि मञ्चका उपाध्यक्ष थिए ।
यसअघि सम्पन्न १० औँ साधारणसभाले अध्यक्ष सरला लामिछाने ‘सरु’ले प्रस्तुत गरेकोे प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
आयोजक पोखरा क्रिकेट एकेडेमीलाई टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधि